URedmi ukwazisa ngefowuni yakhe ye-64 MP kule nyanga | I-Androidsis
I-Redmi enekhamera ye-64 MP iza kufika kule nyanga
Iiveki ezimbalwa ezidlulileyo kwaqinisekiswa ukuba uRedmi wayeza kumilisela ifowuni yekhamera engama-64. Uphawu lwaseTshayina lujoyina lo mkhwa, ngokuthe ngcembe ufumana ubukho phakathi kweempawu kwi-Android. Nokuba ku inkampani khange isinike iinkcukacha ezininzi malunga nokuqaliswa yesixhobo, kodwa ekugqibeleni sineenkcukacha ezithe vetshe malunga noku.
Kwakule nyanga sikwazile ukwazi le fowuni yokuqala yeRedmi enekhamera ye-64 MP. Ukwaziswa okungekho ngengozi, kuba kwisithuba esingaphantsi kweveki siya kwazi enye imodeli ngekhamera ye-64 MP, Kule meko sisandla sikaRealme, njengoko kubhengeziwe kule mpelaveki.
Kwimeko yefowuni yeRedmi awukabi nawo umhla othile okwangoku ukufika kwayo kwintengiso. Kubonakala ngathi iyakwenzeka kwinyanga enye ka-Agasti, ngokutsho kokuvuza okutsha, kodwa akukho zinkcukacha malunga nomhla othile esinokulindela ngawo intetho yakho. Ngaphandle kwamathandabuzo, iya kuba sisindululo esivelisa umdla.
Kukho iimveliso ezingaphezulu kwe- cwangcisa ukwazisa iifowuni ngeekhamera ezingama-64 MP. Kucingelwa ukuba i-Samsung nayo izakusishiya esi kuwa nge-smartphone esebenzisa ikhamera yolu hlobo. Ke sinokubona ngokuqinisekileyo ukuba iimveliso ze-Android zijoyina njani le meko.
Umzali umzali Zombini iRedmi kunye neReal ziya kusebenzisa i-Samsung ISOCELL Bright GW1 isivamvo kwikhamera, eyi-sensor ye-MP eyi-64 kule meko. Nangona umbuzo uza kuba yeyiphi imveliso nganye eza kuyenza nkulu. Inkqubo yekhamera nganye ayisebenzisayo iya kunceda ukumisela impumelelo yale khamera.
Siza kuzimamela iindaba malunga nale fowuni yohlobo lwesiTshayina. Kungenzeka ukuba kwiintsuku ezimbalwa kuya kubakho Nasiphi na isiqinisekiso esivela kuRedmi malunga nokuba singadibana nini nesi sixhobo sitsha. Imodeli apho uluhlu lwentengiso yaseTshayina lwandiswa kancinci, kwaye lunegalelo ekuthandeni kwayo kwintengiso.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » I-Redmi enekhamera ye-64 MP iza kufika kule nyanga
Ungazithatha njani izikrini kwi-Android ngemiyalelo yelizwi
Amalungelo awodwa omenzi wechiza e-LG iselfowuni esongekayo ngesitayile